गुमनाम गुर्जो घरघरमा: किन खाने, कति खाने र कसरी खाने? - Lekhapadhi : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ४ आश्विन २०७७, आईतवार १२:२७ मा प्रकाशित
बिबिसी नेपाली । काठमाडाैंकाे ठमेलमा जन्मिएकी पुनम प्रधान घरअगाडिको बकाइनोको रुखमा झाँगिएको गुर्जो हेरेर हुर्किइन्।
गुर्जोको वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया हो
गुर्जो खाना खानुभन्दा अघि खाँदा त्यसले फाइदा गर्छ ।
साभार विविसी लिंकः गुमनाम गुर्जो घरघरमा: किन खाने, कति खाने र कसरी खाने?
तस्विरः BISHNU POKHAREL/BBC